Moments leh saaxiibo 60
Waa maxay Xusuusta
Xusuus-qorku waa soo-saarista aragtiyaha iyada oo la adeegsanayo tayada, astaamaha, ama awoodaha la iska dhaxlo taas oo wixii aragtiyo ah lagu soo saaray. Xusuusta ma soo saarto maado ama shay ama dhacdo. Xusuusta ayaa soo saarta aragtiyaha ay ka dhasheen maaddada ama shay ama dhacdo. Dhammaan howlaha loo baahan yahay soo saarista aragtiyaha ayaa lagu soo daray xusuusta ereyga.
Waxaa jira afar nooc oo xusuusta ah: xusuusta maskaxda, xusuusta maskaxda, xusuusta cosmic, xusuusta aan xad lahayn. Xusuusta aan dhamaadka lahayn waa ka warqabka dhammaan gobollada iyo dhacdooyinka oo dhan weligood iyo waqti. Xusuusta Cosmic waa dib u soo noqoshada dhammaan dhacdooyinka adduunka oo waara weligiis. Xusuusta maskaxdu waa dib-u-eegista ama dib-u-eegista maskaxda isbedelka ku soo maray tan iyo markii uu asalka u yimid. Ma jiro faa iido la taaban karo oo ka timaadda weydiinta nooca xusuusta aan dhammaadka lahayn iyo xusuusta maskaxda. Halkan waxaa lagu sheegay ujeeddada dhammaystirka. Xusuusta xasaasiga ah waa dib u soo celinta dareenka dareenka iyaga ka soo baxay.
Xusuusta uu ninku adeegsado waa xusuusta dareenka. Ma uusan baran sida loo isticmaalo mana garanayo saddexda kale - xusuusta maskaxda, xusuusta cosmic, iyo xusuusta aan dhammaadka lahayn — maxaa yeelay maskaxdiisu waxay u tababaran tahay isticmaalka xusuusta dareenka oo keliya. Xasuusta dareenka waxaa leh xayawaanka iyo dhirta iyo macdanta. Marka la barbar dhigo ninka, tirada dareenka ka shaqeynaya soo saarista xusuusta ayaa hoos u dhacay xayawaanka iyo dhirta iyo macdanta. Xusuusta dareenka ninku waxaa lagu magacaabi karaa xusuusta shakhsiyadda. Waxaa jira todoba amar oo xusuus ah kuwaas oo sameeya xusuusta shaqsiyadeed ee dhameystiran. Waxaa jira toddobo dareen ah oo ku saabsan shakhsiyadda qofka oo dhan. Toddobadan macallin ee xusuusta ama amarada xusuus-shaqsiyeedka ayaa ah: xusuusta aragga, xusuusta dhawaaqa, xusuusta dhadhanka, xusuusta urinta, xusuusta taabashada, xusuusta akhlaaqda, “I” ama xusuusta qofka. Toddobadaas dareen waxay ka kooban yihiin hal nooc oo xasuusta uu ninku ku leeyahay xaaladdiisa haatan. Xusuus-qorka shakhsiyadeed wuxuu ku xaddidan yahay waqtiga qofka xusuusta dib ugu soo celiya naftiisa waxyaabihii ugu horreeyay ee dunidan, iyo soo-saarista aragtiyaha laga soo qaatay daqiiqadihii ka horreeyay xilligan la joogo. Qaabka loo diiwaangelinayo dareenka iyo soo-celinta aragtiyaha ka diiwaangashan aragtida, codka, dhadhanka, urta, taabashada, niyadda iyo “Aniga”, iyo geedi socodyada qotodheer iyo isku xirnaanta kuwan si loo muujiyo shaqada faahfaahsan ee lagama maarmaanka u ah “xusuus , ”Waxay noqon laheyd mid aad u dheer oo dhib badan. Laakiin sahan ayaa la qaadi karaa kaas oo noqon kara mid xiiso leh oo ku siin kara fahamka xusuusta shaqsiyadeed.
Farshaxanka sawirku wuxuu muujinayaa xusuusta aragga — sida aragtiyaha ka soo baxa ashyaa'da loo helo loona duubo iyo sida muuqaallada ka dib loo soo saaro diiwaanka. Aaladda sawirku waa adeeg farsamo ahaan farsamada aragtida aragtida iyo ficilka aragtida. Araggu waa qalliinka habka isha iyo iskuxirkiisa, duubista iyo soo bandhigista aragtiyo la muujiyey oo iftiin laga sameeyay. Sawirista shay, muraayadda ayaa la qariyey, oo loo jeedsaday shayga, heerkulka sare ee diaphragm waxaa loo dejiyey gelitaanka qaddarka saxda ah ee iftiinka, diiradda ayaa lagu go'aamiyaa masaafada lenska shayga laga sawirayo; xadka waqtiga gaadhista — filimka xasaasiga ah ama saxan diyaar u ah inuu helo aragtida shayga kahor intuusan dhicin — waa la bixiyaa, oo aragtida, sawirka, ayaa la qaadaa. Furitaanka baalalka indhaha ayaa furmaya isha isla; iris, ama diaphragm isha, waxay si otomaatig ah isugu toosinaysaa xoogga ama maqnaanshaha iftiinka; ardayga isha ayaa sii ballaaranaya ama qandaraas si uu u diiradda saaro xariiqda aragtida shayga u dhow ama fog; shayga ayaa la arkaa, sawirka waxaa qaadaya dareenka aragtida, halka inta xoogga la saarayo.
Hababka aragtida iyo sawirku waa isku mid. Haddii shaygu dhaqaaqo ama haddii lensku dhaqaaqo ama isha la beddelo, waxaa jiri doona sawir aan caadi ahayn. Dareenka aragtida ma aha mid ka mid ah qalabka farsamada gacanta. Dareenka araggu waa shay kala duwan, ka duwanaanshaha habka kaliya ee isha maadaama saxanka ama filimku aad uga fog yihiin kamaradda. Waa dareenka aragtida, ka duwan in kastoo ku xiran habka isha, kaasoo diiwaangeliya aragtida ama sawirada sheyga laga helay aaladda farsamada ee isha.
Aragga waa qaadashada diiwaannada oo laga yaabo inay dib u soo saarto xusuusta aragga. Xusuusta aragga waxay ka kooban tahay tuurista ama daabacaadda shaashadda muuqaalka sawirka ama muuqaalka oo la duubay oo lagu hagaajiyay dareenka aragga waqtiga la arko shayga. Nidaamkan xasuusta aragga waxaa lagu muujiyaa daabacaadda sawirro laga soo qaaday filimka ama saxanka ka dib markii la horumariyo. Waqti kasta oo qof ama shay la xasuusto daabacaad cusub ayaa la sameeyaa, sidaa la odhanayo. Haddii qofku uusan lahayn xusuus cad oo sawir ah waxaa ugu wacan isaga kaas oo ah aragtida, dareenka aragtida, inuu yahay mid aan horumarin oo aan qornayn. Marka dareenka aragtida qofka la horumariyo oo la tababaro, waxay dib u soo saari kartaa goob kasta ama shay ay ku faani karto dhammaan caddaynta iyo xaqiiqada jirta ee xilligii la arkay.
Daabacaadda sawirrada xitaa, haddii lagu qaato midab, waxay noqon lahayd nuqulo xumo ama sawirro xusuusta aragga ah markay si wanaagsan u tababaran tahay. Wax yar oo tijaabo ah ayaa laga dhaadhicin karaa mid ka mid ah suurogalnimada xusuusta aragiisa ama xusuusta kale ee xusuusta shaqsiyadeed.
Mid ha iska xiro indhihiisa oo u jeedi gidaar ama miis ay ku jiraan walxo badan. Haddaba ha u furo indhihiisa jajab yar oo labaad oo ha xidho, isagoo daqiiqaddaas isku dayay inuu arko wax kasta oo indhihiisu ku jeedeen. Tirada waxyaabaha uu arko iyo sida ay u kala duwan yihiin ee uu ku arkaa waxay u adeegi doonaan si ay u muujiyaan sida ay u horumarsan tahay xusuusta araggiisa. Tababbar yar ayaa muujinaya sida ay ugu suurta gasho isaga inuu horumariyo xusuusta aragiisa. Waxaa laga yaabaa inuu siiyo waqti dheer ama muuqaal gaaban, si uu u arko waxa uu arki karo. Markuu daahyada ka soo qaadayo indhihiisa qaar ka mid ah waxyaabaha uu indhihiisa ku soo arkey indhaha waa la yareyn doonaa iyadoo indhihiisu xirnaanayaan. Laakiin walxahaasi way sii yaraan doonaan oo ugu dambayntiina way baabi'i doonaan ka dibna isagu ma arki karo walxahaas isla markaana waxa keliya ee uu maskaxdiisa ka helayo ay ka muuqato waxa uu ku arkay xusuusta araggiisa. Ka dhicitaanka sawirka waxaa sabab u ah awood la'aanta aragtida aragtida si loo qabto dareenka sheyga. Iyada oo la adeegsanayo jimicsiga araga ama xusuusta sawirka si loo soo saaro walxaha hada jira iyadoo indhuhu xidhan yihiin ama dib loogu soo saari karo muuqaalada hore ama shakhsiyaadka, xusuusta sawirka ayaa la horumarin doonaa, oo waxaa laga yaabaa in si aad ah loo xoojiyo oo loo tababaro sida loo soo saaro feeraha la yaabka leh.
Qormadaan kooban ee xusuusta aragtida waxay u adeegsan doontaa inay muujiso waxa kale ee xasuus-yahanka kale yahay iyo sida ay u shaqeeyaan. Sida sawirku u sawirayo xusuusta aragtida, sawir-qaaduhu wuxuu tusaale u yahay duubista dhawaaqyada iyo soo-saarista diiwaannada sidii xusuusta codka. Maskaxda codku way ka duwan tahay dareemaha maqalka iyo aaladda dhegta maadaama dareenka aragu uu ka duwan yahay neerfaha indhaha iyo qalabka isha.
Waxyaabaha loo adeegsado farsamada ayaa la soo saari karaa si loo nuqulo dareenka dhadhanka iyo urta dareenka iyo dareenka taabashada maadaama kamaradu iyo cod-weynaha ay yihiin kuwa isu eg, in kasta oo nuqulada liita iyo nuqulo aan la ogaan — ay yihiin xubnaha bini aadamka ee ku xidhan aragtida iyo dareenka dhawaaqa.
Xusuusta dareenka akhlaaqda iyo “I” xusuusta dareenku waa labada dareen ee kaladuwan ee aadanaha, waxaana sabab u ah kuna suurtagelinaya jiritaanka maskaxda maan dooriyaha ee adeegsata shakhsiyadda. Dareenka caqliga leh ee shakhsigu wuxuu ku bartaa shuruucda noloshiisa, iyo inuu u soo saaro kuwaan xusuusta akhlaaqda halka su'aasha saxda ah ee khaldan ay tahay. Xusuus-qorka "I" wuxuu awood u siinayaa shakhsiyadda inay garto nafteeda iyadoo lala xiriirinayo dhacdo kasta oo ka dhacda masraxa ama muuqaallada ay ku nooleyd. Waqtigan xaadirka ah maskaxda maskaxdu waxay leedahay xusuus aan ka badnayn xusuusta shaqsiyadeed, iyo xusuusta ay karti u leedahay waa kuwa keliya oo la magacaabay oo sameeya shakhsiyadda guud ahaan, taas oo ku kooban waxa la arki karo, ama la maqli karo, ama urin, ama dhadhamisay, ama taabtay, oo dareensan inay saxan tahay ama khaldan tahay iyada lafteeda sidii jiritaan gooni ah.
In Ereyga Diseembar waxaa looga jawaabi doonaa su'aasha ah, "Maxaa sababa luminta xusuusta," iyo "Maxaa sababa in qofku iloobo magiciisa ama meeshuu ku nool yahay, in kasta oo xusuustiisa laga yaabo inaysan u dhag jabin dhinacyada kale."